ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ရဲ့ Relationship အပေါ်မှာ စိတ်မလုံမခြုံ ဖြစ်နေရတာလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
ကိုယ့် relationship ပေါ်မှာ မယုံကြည်၊ စိတ်မချတဲ့ သူတွေက အရမ်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အရာတွေလုပ်တတ်တယ်။ Messageတွေ တစ်ချိန်လုံးပို့တာ၊ တစ်ချိန်လုံး ဘယ်ရောက်နေလဲ ဖုန်းဆက်တာ၊ ချစ်သူရဲ့facebook password တွေတောင်းပြီးတော့ သူ့အကောင့်ထဲ တစ်ချိန်လုံး ဝင်ကြည့်နေတာ။ စိတ်ပူလို့ဆိုပြီး ဒီလိုလုပ်တာတွေက ကြာလာတော့ အကျင့်တွေပါပြီးဆက်လုပ်နေမိတာကြောင့် တစ်ဖက်သားမှာ နေရ ထိုင်ရ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပါတယ်။
မိဘတွေဆီက ဂရုစိုက်မှုနဲ့အချစ်ကို ကောင်းကောင်းမရလို့ ငယ်ငယ်က မိဘနဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့ တစ်လျှောက်မှ ကလေးငယ်တွေက သူ့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်သူနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိခဲ့ဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကလေးငယ်ဟာ သူ့ပြုစုစောင့်ရှောက်သူဆီကနေ လုံလောက်တဲ့ ပြုစုယုယဂရုစိုက်မှုနဲ့၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တွေကို လုံလုံလောက်လောက်မရခဲ့ရင် စိတ်မလုံမခြုံ နဲ့ကြီးပြင်းလာရပြီး တစ်ပါးသူကိုယုံကြည်ဖို့ခက်တဲ့လူတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
အရှေ့က လူတွေ မကောင်းခဲ့လို့
အရှေ့က သူတို့တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားတွေ၊ သူတို့ပေါင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ သူတို့အပေါ်မှာ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလုပ်ခဲ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ပစ်ပယ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တာတွေ၊ သူများတွေငါ့ကို မလိုချင်ပါလားလို့ခံစားမိတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူများကိုမယုံကြည်တာ၊ မိမိချစ်သူ၊ မိမိrelationshipအပေါ် မယုံကြည်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
မိမိဟာ ကိုယ့် ချစ်သူ ရည်းစား မပစ်သွားနိုင်လောက်အောင် စွဲမက်ဖွယ် ပညာ၊အရည်အချင်း၊ ရုပ်ရည်ရူပကာ မရှိဘူးလို့မိမိမသိစိတ်က ထင်တဲ့အချိန်မှာ ထို မသိစိတ်နဲ့ပဲ တစ်ဖက်လူ ထွက်မသွားအောင် မှားယွင်းတဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ချုပ်ကိုင်ပြီး အတင်းဆွဲ ထားဖို့ကြံစည်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို နည်းလမ်းတွေကိုသုံးထားက တစ်ဖက်သူကို ဝေးဝေး ပိုရောက်အောင်တွန်းပို့နေသလိုပါပဲ။
ဒါကို ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲ?
အပေါ်ကစာကို ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တကယ်ပြဿနာ ဖြစ်နေတာ မိမိချစ်သူမဟုတ်ဘူး။ မိမိဘာသာ စိတ်မလုံခြံမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတာ ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့မှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်လိုအရာတွေက ကိုယ့်ကို confidence တက်စေမလဲ? ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆံပင်ညှပ်တာ၊ မိမိကိုယ်ကို ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လှလှပပဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါပဲ။ မိမိလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေတက်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်အောင်နေပါ။ သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေးမှမဟုတ်၊ မိသားစုသူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ပါ။ တရားထိုင်ပါ။မိမိကိုယ်ကို ချစ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို ချစ်အောင်၊ မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်အားကိုးတတ်အောင်လေ့ကျင့်ယူပါ။
“အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော၊ မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာ” ဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကား ရှိနေခဲ့တာမှမဟုတ်တာပဲ။ သူများတွေပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို မိမိကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ကုစားနိုင်ပြီး confidenceအပြည့်ရှိတဲ့ လူသားတွေဖြစ်လာပါစေလို့ရိုးရာလေးက အားပေးလိုက်ရပါတယ်။
Ref: Lifehack “What you really need to fix insecurity inarelationship forever”
Previous Previous post: ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းကို တွေ့လို့တွေ့ငြား ရှာနေတာတွေ ရပ်လိုက်သင့်ပါပြီ
Next Next post: ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပသွားမည့် ONE: REIGN OF VALOR ပြိုင်ပွဲ၏တွဲဆိုင်းများကို ONE Championship™ ကထုတ်ပြန်ကြေညာ